Translate Czech to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Czech to Myanmar (Burmese), Czech to Myanmar (Burmese) translations, Czech to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Ahoj, jak se máš မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Je tam někdo? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Miluji tě opravdu moc ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Kolik stojí tento hamburger? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Můžeš mi zavolat taxík? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
To mi je líto ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
mám zájem ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Můj let byl odložen အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Jsem tady pro práci ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Dobrý den, jmenuji se မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Je mi líto, ale jsem ženatý ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Chtěl bych se vás zeptat ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Můžeš mě vzít na letiště? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Jaký je čas právě teď, prosím? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Kde je nejbližší policejní stanice? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Mohu si zapůjčit nabíječku telefonu prosím? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Můžeš mi pomoci? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Objednejte mi drink, prosím? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Kolik to bude stát? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Jsem alergický na glutén ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Zavolejte lékaře ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Je tam lékař? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Můžu volat? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Zavolejte mi prosím svého šéfa. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Toto místo je velmi hezké ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Vezměte mě prosím do hotelu ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Jaké je číslo mého pokoje? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?